Ukubulawa kwabantu ngezibhamu zase-Afrika ngoJuni 19 no-20, 1940 ekungeneni eLyon - Afrikhepri Fondation
ulwesihlanu, ephreli 9, 2021
Izigebengu zaseSenegal ziboshiwe eMonts d'Or ngaphambi kokudubula
Dn uhlaka lomlando wethu ocashile, ngukucwaswa kwabantu ngokobuhlanga kwabantu baseSenegal tirailleurs ababefunwa yiFrance, ngesikhathi sempi ka-1939-45. Emnyango osenyakatho weLyon naseGolden Mountains, ngoJuni 19 no-20, 1940, ngamabomu abizelwa lapho impi yalahleka khona ngaphambili, izibhamu zaseSenegal zabulawa ngesihluku ngamaJalimane. Enkanjini yaseThiaroye, ngaseDakar, eSenegal, kwakuyibutho laseFrance elibadubula ngobusuku bukaDisemba 1 kuya ku-2, 1944.
Emlandweni weMpi Yesibili Yomhlaba, umlando wabashayeli bezempi baseSenegal awukho, yize isenzo sabo besithathe isinqumo. Ukungabikho ezincwadini zesikole, akukho lutho noma cishe akukho okufakazela ubukhona obunqumayo be-Afrika enkululekweni yaseFrance. Kwakuse-Afrika lapho u-de Gaulle ahlela khona ukuphikiswa futhi, ngenxa yokuntuleka kokwesekwa ngabantu bakubo, kwakusemhlabathini wase-Afrika lapho agcina khona ukuthola iningi lamabutho akhululekileyo aseFrance. Kepha, njengasemikhakheni eminingi, iFrance iphinde futhi yakhetha ukukhohlisa okungokomlando.
Ukubhaliswa kwabantu base-Afrika ebutho laseFrance
Uma iqembu lokuqala lama- “teneilleurs tirailleurs” lakhiwa eSaint-Louis-du-Senegal, iningi lamasosha akuwona wonke avela eSenegal. Kukhona nabantu abavela eMali, Burkina Faso, Chad, Sudan, Central African Republic, West Africa naseNyakatho Afrika.
IFrance kaningi isebenzisa izindlela zobuqaba ukuthola abase-Afrika. UCharles Onana, encwadini yakhe ethi La France et ses Tirailleurs, ucaphuna ubufakazi buka-Ateba Yene: Emadolobhaneni, umsebenzi wokugqugquzela abantu ababehamba ngenkani wawudlangile. Abomdabu abanokwakhiwa kwezemidlalo bathathwa futhi baboshwa ngentambo okhalweni lwabo ngebhusha lamaNazi njengendawo abaya kuyo.
Izithunywa zevangeli ezingamaKhatholika, nazo, zadlala indima ebaluleke kakhulu futhi zazingasebenzi. Umbhishobhi waseFrance, uMonsignor Graffin , ngo-1941, ngokuhlangana komphathi waseCerberus ogama lakhe linguSalin, wahlela umbuthano ohlazisayo ekupheleni kwenqwaba yemikhosi ephakeme yamaKatolika eMvolyé, okuyisonto kuphela elamukela bonke abathembekile baseYaoundé. Ekupheleni kwemisa, isonto lalizungezwe intambo yamasosha ephethe izibhamu ezingaphansi. Laba abathembekile balayishwa ngokungafanele emalolini amasosha… ”
Ngakho-ke abaningi base-Afrika babhaliswa ngamandla ebutho laseFrance.
Lolu hlobo lukakhokho lwaziwa kahle: lusebenzisa, ngendlela engafanelekile, isithombe sesibhamu saseSenegal, esithuka kabi futhi esidelela abantu base-Afrika.
Umsebenzi omuhle njengekolonialism!
Lapho kuqala impi yezwe yesibili, phakathi kwe-1939 noJuni 1940 bayi-100.000 ukuba babhaliswe emakoloni ezizokuvikela idolobha elikhulu. Izinhlobo eziyisishiyagalombili zezibhamu zaseSenegal zibamba iqhaza emkhankasweni waseFrance. Phakathi kwe-10 Meyi ne-25 Juni 1940 cishe eyodwa kwezi ezine kulezo zikebhe zabulawa noma zabulawa. Ngokuvamile babulawa ngemuva kwempi ngezimo ezihlasimulisa umzimba, futhi ngenxa yalokho baba phakathi kwezisulu zokuqala emhlabeni waseFrance wobandlululo lobuNazi.
Eshiywe ekulahlekelweni phansi, aqedwa ngesikhathi sokubulawa okufingqiwe, la mabutho amakoloni agcwalisa amakamu ejele amaNazi. Kwakungaba nabangu-42.000 XNUMX eFrance kuphela. Amandla eFree France abuye akhe kabusha e-Afrika phakathi kwamanye ngaphansi kwesigungu sika-Governor Félix Éboué. Akubona bonke ababeyizisebenzi zokuzithandela, kude nayo, kepha ingxenye yamasosha aseFrance afika eProvence ayeqashiwe emakoloni. Ukuhlukaniswa kweLeclerc uqobo kwakwenziwe kakhulu ngabantu base-Afrika (namaSpanish Republican).
NgoJuni 18, 1940, waseLondon, uGeneral de Gaulle wamemezela isicelo sakhe esidumile. Kepha, ngomhlaka 19, amaJalimane asondela eLyon, kwaba nokudideka okuphelele kuhulumeni, isimo sasimanzonzo futhi kwakungelona ize ibutho laseFrance elibeke emasangweni asenyakatho eLyon ibutho lama-25 lamaSenegal Tirailleurs, ngaleyo ndlela kugwenywe amaFrance ukulahlekelwa okuphelele. Kubandakanya, ngaphezu kwezikhulu ezimbalwa zaseFrance, ikakhulukazi abase-Afrika, ikakhulukazi abaseSudan nabaseSenegal. Izikhulu ziyazi ukuthi kuzoba yimpi yokuhlulwa futhi zizibiza “ngokulwela udumo”.
Emkhakheni wakhe, lapho ibanga elingamakhilomitha angamashumi amabili lidlula kakhulu amandla akhe, uColonel ophethe i-RTS yama-25 (iSenegalse Tirailleurs Regiment) wabeka amabutho amabili, ngokusho kwemiyalo ayithole kumphathi wakhe, "kulayini jikelele iCuris, eSaint- IGermain-au-Mont-d'Or, iChasselay, iMarcilly-d'Azergues, iLozanne, i-L'Arbresle ”futhi bagcina indawo encane yokugcina indawo ngaseChampagne-au-Mont-d'Or lapho aqala khona umsebenzi wakhe. yomyalo.
Kepha lemiyalo futhi icacisa: Uma kwenzeka uhlaselwa, bamba wonke amaphuzu wokusekelwa ngaphandle kokutholwa, noma uchichima. Gcina kuzo zonke izindleko isikhathi seSaône-Azergues lapho i-N 6 idlula khona.
Siyambona, uma kunesidingo, ukuba ibulawe khona lapho.
Umhlangano waseMontluzin e Chasselay
Impi ibanga le 19 ngoJuni ekuqaleni kwe-9h30, futhi ikakhulukazi eChasselay, phambi kwendlu yaseMontluzin, ekhungathekile amaJalimani ibheke kwi-16h. I-20 Juni, eduze kokunyuka kweChampagne, i-27 yayo idutshulwa ibhekiswe odongeni olungezansi kokukhuphuka kweBalmont: odongeni lwe3, ekukhuphukeni kweBalmont, umuntu angafunda leli banga: I19 June 1940 , ngamasosha ama-27 Senegalese abulawa ubugwala amelana nebutho lamaNazi. Umuntu uzibuza ukuthi ngabe ubugwala kunabo bonke kuleli cala akuzona yini iziphathimandla zaseFrance!
Endaweni ebizwa nge-Empty-Bag, wonke ama-Afrika ahlanganiswa nomshini wesibhamu nomgqomo wamathangi aseJalimane. Izimoto ezihlome ngezikhali zichoboza abafileyo nabafayo ngamacimbi abo. Yonke indawo, ngokucwasana, amaNazi azingela ama-Afrika ukuze abadubule, okubandakanya iziboshwa, eshiya impilo yamaphoyisa ambalwa amhlophe kuphela. Ngalezi zinsuku, wonke amasosha ase-Afrika atholakala kumaJalimane abulawa ngokuhlelekile. Lokhu kubulala kuzoba njengokuthi emadodeni ama-1.800, kuzobalelwa ama-1.333 asebafa futhi kuzoba, ngaphandle koyedwa noma babili, bonke abantu base-Afrika.
Amathuna, abizwa ngeSenegalse Tata abuye amiswa eChasselay, aqukethe izidumbu eziyi-188 kuphela, ezinye izisulu zishiswe khona lapho. Kepha eLyon sikhumbula ikakhulukazi, lapho sikhuluma ngezinhlekelele zale mpi, ukuqhunyiswa kwamabhomu kwaseMelika ngo-1944, okwathinta kakhulu abantu baseLyon, eGivors naseBadan egcekeni, isifunda iJean-Macé kanye la Guille, isifunda iGare de Vaise kanye nesifunda Sezimboni eSt Rambert. Lokhu kuqhunyiswa kwamabhomu kwaseMelika, obekufanele ukuthi kuvimbe iziteshi eLyon, kudale izisulu ezingama-717. Yize leli nani libalulekile, lingaphansi kwenani eliphelele labantu base-Afrika ababulawa amaNazi.
Yingakho kubaluleke kakhulu ukwazisa ukuthi iFrance ibulale amaJalimane amaningi ase-Afrika emhlabathini we-Greater Lyon ngoJune 1940.
ETiaroye, ngoDisemba 1944, iFrance yabulala ama-Afrika ayelwele amaFulentshi!
Izinkinga zaqhubeka neNkululeko ngo-1944. Amasosha amaFulentshi amhlophe kanye nezibhamu zaseSenegal abaphathwa ngokulingana. Ukuthengisa, ukukhushulwa, imishini, kwehlukile. Ukucwaswa okukhulu kuvela ekubaleni kwesinxephezelo seziboshwa. Isikhathi esiningi iziboshwa zase-Afrika ezikhululiwe zizithola zingenayo imishini futhi zingenamali. NgoNovemba 1944, kwaba nokuhlubuka okuningi ezindaweni eziningi, eMorlaix, eHyères, eVersailles, nasempini yaseFrance banquma ukubuyela ngenkani e-Afrika. Le nhlekelele yenzeka eSenegal.
Ama-skirmishers e-21 Novemba 1944, 1 280 Senegalese atholakale eDakar futhi aqoqelwa ekamu lokuhamba lezempi laseTiaroye-sur-mer ukuze ancishiswe. Basuswa kumayunifomu wamasosha okwadingeka bawashuthele ngengubo ejwayelekile futhi kungaleso sikhathi lapho aphoqwa khona ukuthi bafake isigqoko esibomvu esidelelayo manje sokwedelela. Ebhekene nokudumazeka ngezethembiso ezingagcinwanga yiFrance, ukuthotshiswa ngenxa yombala wesikhumba, nokucwaswa kwabaphathi bamasosha embuthweni wamaFrance, bayakugcizelela nokho ukuthi bathi imali yabo esele.
Njengoba ebhekene nokunqatshwa okusha kwamakhanda eFrance, abakwa-skirmisher bahlukumeza futhi ngo-Disemba XNUM ngo-Disemba bathatha isikhulu, okwagcina bebathembise ukuthi bazobuyisela isimo. Kodwa amanga amakhulu!
Ngempela, esanda kukhishwa, lo mqondisi jikelele, nesivumelwano sobukhosi bakhe, uhlasele ikamu ngamakamelo amaningana eFrance asekelwa yi-gendarmerie; njengoba nje "i-tirailleurs sénégalais" sebesebenzile ngokuphelele futhi behlukunyezwa ngokuphelele, babulawa kulobubusuku buka-2 December 1944 kuya ku-3 ekuseni.
Asazi inani eliqondile lababulewe: 30? 60? 100? Kunikezwa ezinye izibalo ezihlaba umxhwele. Iziphathimandla zaseFrance ziyathula ngale nombolo futhi akukaze kube khona ikhomishini yophenyo.
Njengokungathi lokho bekunganele, abaningi balaba abasindile bazogwetshwa iminyaka emibili nengu-2 ejele "ngokungathobeli", kanti abanye bese bevele bephuma emakamu okuhlushwa amaNazi!
Yebo, "ama-tirailleurs aseSenegal" akhokha kakhulu ngokuthembela kwabo eFrance.
 UGraffin: bheka ngokufuna ukwazi umlando wakhe osemthethweni owenziwe “ngabathunywa bevangeli bakaMoya oNgcwele” nokuthi iSonto LamaKatolika limdumisa kanjani lo mgqugquzeli wokuhweba ngezigqila ukuze kuzuze ibutho laseFrance…
 Ukubona: Ifilimu ka-Ousmane Sembene, “Camp de Thiaroye”, 1988, imizuzu engu-147, eSenegal - ifilimu elicutshungulwa iminyaka eminingi yiFrance.
Uhambo olude lweSenegalese skirmishers: ukusuka eMpini Omkhulu kuya ekuzimele (Umlando)
Kugcine ukubuyekezwa ngo-Ephreli 9, 2021 10:39 pm
Okushiwo Injabulo - Jiddu Krishnamurti (Audio)